Uluhlu lweMigaqo yeMfazwe yeCold
Funda iMigqaliselo ekhethekileyo yeMfazwe yeHlabathi
Yonke imfazwe inegoggon yayo kunye neNtsholongwane yeMfazwe, nangona kwakungekho ukulwa okuvulekileyo, kwakungekho nto. Oku kulandelayo uluhlu lwemigqaliselo esetyenziswe ngexesha leMfazwe yeCold . Ixesha eligqithiseleyo kakhulu liyilo "incitshu ephukileyo."
Iinqwelo zokulwa ne-anti-ballistic (ABMs) zenzelwe ukudubula iibhola (ballmarkets bearing weapons weapon) ngaphambi kokuba zifikelele kwiinjongo zabo.
Ukwakhiwa kwamasosha amakhulu, ngokukodwa kwezixhobo zenuzi, zombini i-Soviet Union kunye ne-United States ngenzame yokufumana ubukhulu bempi.
Injongo yokwandisa imeko enobungozi ukuya kumda (nge-brink), ngelixa unika ingqondo yokuba uzimisele ukuya empini, ngethemba lokuxinzelela abachasi bakho ukuba baphinde bahlawule.
Ibhokliya yenyukliya enokulahlekelwa, eyebiweyo okanye eyenziwe ngengozi eyenza ingozi yenyukliya. Nangona iintolo eziphukileyo zenza i-movie eninzi kwi-War of Cold, i-arrow ebomvu yangempela-bomi ephukile yenzeke ngoJanuwari 17, 1966, xa i-US B-52 ibhujiswe ngaphandle kweNxweme yaseSpain. Nangona zonke iibhomu zenyukliya eziphakathi kwe-B-52 zagqitywa kwakhona, izinto ezinokusasaza izinto zonakalisa iindawo ezinkulu ezikufutshane kweso sakhiwo.
Umda owela ngaphaya kweWest Berlin naseMpuma eBerlin xa iWall yaseBerlin yahlula isixeko.
Umzabalazo wamandla phakathi kweSoviet Union kunye neUnited States eyaqhubeka ekupheleni kweMfazwe Yehlabathi II kwada kwawa kweSoviet Union.
Imfazwe yayicingelwa "kubanda" ngenxa yokuba ulwaphulo lwaluyinto yokucinga, ezoqoqosho, kunye nezobupolisi kunokuba impi yezempi.
Ingcamango yezoqoqosho apho ubunikazi bepropati edibeneyo bukhokelela kuluntu olungenamntu.
Ifom karhulumente kwi-Soviet Union apho i-state inayo yonke indlela yokuvelisa kwaye yayikhokelwa yiqela elilawulayo, elilawulayo.
Oku kwajongwa njenge-antithesis yentando yeninzi e-United States.
Umgaqo-siseko waseMelika waseMzantsi Afrika ngexesha leMfazwe yongqungquthela apho ama-US azama ukuxhomekeka kobuKomanisi ngokuthintela ukusasazeka kwamanye amazwe.
Isibhengezo esithi "imeko yokulungela ukukhusela." Ixesha lilandelwa yunombolo (enye ukuya kweyesihlanu) ekwazisa imikhosi yaseMelika ukuba ingqongqo yongelo, kunye ne-DEFCON 5 emele iimeko eziqhelekileyo, ukulungela ixesha loxolo kwi-DEFCON 1 ukuxwayisa isidingo sokulungelelanisa amandla okubakho, oko kukuthi imfazwe.
Ukuphumla kwengxabano phakathi kwamandla amakhulu. Bona iinkcukacha kwiNtuthuko kunye nokusilela kweDentente kwiMfazwe yeCold .
Iingcamango eziphakanyisiwe ukwakheka okukhulu kwemikhosi kunye nezixhobo ukwenzela ukusongela ukuhlaselwa okutshabalalayo kwanoma yintoni na ukuhlaselwa. Ingozi yayijoliswe ekukhuseleni, okanye ekunqandeni, nabani na onokuhlaselwa.
Ukukhusela indawo yokuhlala
Izakhiwo ezingaphantsi komhlaba, ezinokutya kunye nezinye izinto, ezijoliswe ukugcina abantu bekhuselekile kwi-fallactiveactive fallout emva kokuhlaselwa kweenyukliya.
Ukwazi ukuqala isiteleka
Ikhono lelizwe elilodwa lokuqalisa ukumangalisa, ukuhlaselwa okukhulu kwekhamliya kwelinye ilizwe. Injongo yesiteleka sokuqala kukususa ezininzi, ukuba kungekhona zonke, izixhobo zelizwe eziphikisayo kunye neenqwelo, ngokubashiya abakwazi ukuqala ukuhlaselwa.
Umgaqo-nkqubo okhuthazwa ngethuba lesibini ekupheleni kwee-1980 kwi-Soviet Union nguMikhail Gorbachev apho ukufihla uhulumeni (okwakuboniswe kwiminyaka emininzi edluleyo yemigaqo yeSoviet) yadikibala kwaye kwavuzwa ingxoxo kunye nokuhanjiswa kolwazi. Eli gama liguqulela "ukuvuleka" ngesiRashiya.
Umgca othe ngqo wokunxibelelana phakathi kweNdlu ye-White kunye ne-Kremlin eyasungulwa ngo-1963. Ngokuqhelekileyo ibizwa ngokuthi "ifowuni ebomvu."
Imikhosi ye-Intercontinental ballistic yayiyimibhobho ekwazi ukuqhuba amabhomu enyukliya kumawaka eekhilomitha.
Ixesha elisetyenziswe nguWinston Churchill ngentetho yokuchaza ukwahlukana okukhula phakathi kwedemokhrasi yasentshona kunye ne-Soviet-influenced states.
Isayinwe ngo-Agasti 5, 1963, esi sivumelwano sivumelwano somhlaba wonke sokuthintela ukuhlolwa kweempahla zenyukliya kwimoya, ngaphandle, okanye ngaphantsi kwamanzi.
Inkxalabo ngaphakathi kwe-US ukuba i-Soviet Union yayidlulele kakhulu i-US kwimpahla yayo yesikhekliya.
I-MAD yayisisigqibo sokuba ukuba omnye umntu onamandla angenelela ukuhlaselwa okukhulu kenyukliya, omnye uya kuhamba ngokutsha nokuhlaselwa okukhulu kwenyukliya, kwaye zombini amazwe aya kutshatyalaliswa. Oku ekugqibeleni yaba yinto ephambili yokuchasene nemfazwe yenyukliya phakathi kwezi zimbini.
Ukwaziswa ngoJuni ka-1987 nguMikhail Gorbachev , umgaqo-nkqubo wezoqoqosho ukulungiswa koqoqosho lweSoviet. Eli gama liguqulela "ukuhlengahlengiswa" ngesiRashiya.
Iingxoxo zoLungiso lweeArms Strategic (SALT) zithethwano phakathi kweSoviet Union kunye neUnited States ukukhawulela inani lezixhobo zenuzi. Iintetho zokuqala zandisiwe ukusuka ngo-1969 ukuya ku-1972 kwaye zaphumela kwi-SALT I (iSicwangciso sokuQiniseka kweArms yokuqala) apho icala ngalinye livunyelwene ukugcina i-launchistic ballistic missile kwinani labo langoku kwaye linikezela ukwanda kwinqwelo-mandla ye-submarine (SLBM) ) ngokumalunga nokunciphisa inani leembalo ze-ballistic intercontinental (ICBM). Ingqungquthela yesibini yokuthathethathethana kwandiswa ukusuka ngo-1972 ukuya ku-1979 kwaye yabangela ukuba i-SALT II (iSibini yesiCwangciso soPhuculo lweArms) esinikezela ububanzi obuninzi kwiimpahla zenyukliya ezihlaselayo.
Ukhuphiswano phakathi kweSoviet Union kunye neUnited States ukubonakalisa ukuphakama kwabo kwi teknoloji ngokufezekisa ngokuphumelelayo kwendawo.
Umncintiswano oya kwithuba waqala ngo-1957 xa i-Soviet Union iphumelele ngokusungula i-satellite yokuqala, iStutnik .
Isiteketiso (esekelwe kwi- Star Wars movie trilogy) isicwangciso sikaMongameli waseMelika uRonald Reagan ukuphanda, ukuphuhlisa, nokwakha inkqubo esekelwe kwisithuba esinokutshabalalisa imikhosi yenyukliya engenayo. Ukwaziswa ngoMatshi 23, 1983, kwaye wabiza ngokusemthethweni iSicwangciso soKhuselo loKhuselo (SDI).
Ilizwe elilawula amandla emapolitiko nasemkhosini. Ngethuba leMfazwe yeCold, kwakukho amabini amakhulu: i-Soviet Union kunye ne-United States.
I-Union of Soviet Socialist Republics (i-USSR), ebizwa ngokuba yiSoviet Union, ilizwe elibandakanya ngoku iRashiya, iArmenia, iAzerbaijan, iBelarus, i-Estonia, i-Georgia, i-Kazakhstan, i-Kyrgyzstan, iLatvia, iLithuania, iMoldova, iTajikistan, ITurkmenistan, iUkraine, ne-Uzbekistan.
I-Perl ikhona () Umsebenzi - I-Quick Tutorial
Iimpawu zeeJografi zaseDolophu
Imidlalo ye-Skateboarding Top 6
Iiprogram ze-MBA ze-Chicago kunye ne-Admissions
Umfutshane osebenzayo ngokubhekiselele kwixesha elide kwi-Economics
IiNdawo eziManyeneyo zamaNdiya